Ganacsade lagu dilay Magaalada Baledweyne – STAR FM SOMALIA
Ganacsade lagu dilay Magaalada Baledweyne
Rag bistoolado ku hubeysnaa, ayaa xalay Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan ku dilay nin ganacsade ahaa, oo laga garanaayay Magaaladaasi, halka ay dhaawac u gaysteen wiil uu dhalay.
Ganacsadaha, ayaa waxaa lagu dilay xaafadda Kooshin, gaar ahaan laanta Raadeerka, iyadoo weerarka ka dib ay goobtaasi ka baxsadeen dembiilayaasha.
Ganacsadaha oo lagu magacaabi jiray Daahir Mahad Alle iyo wiilkiisa, ayaa waxaa loo galay wadada, xilli ay Salaadda Cishaha ku soo tukadeen Masaajid ku yaala Raadeerka, kuna sii jeedeen hoygooda.
Ciidamada Dowladda oo dilka ka dib ku baxay goobtii uu falku ka dhacay, ayaa waxay ka sameeyen hawlgal, walow aysan ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan raggii dilka gaystay.
Allaha u naxariistee ganacsade Daahir, ayaa meydkiisa la geeyay Isbitaalka Magaalada Baledweyne, iyadoo sidoo kalana lagu dabiibayo wiilkiisii.
Agaasimaha Isbitaalka Guud Baledweyne, Dr. Axmed Maxamed Khaliif, ayaa xaqiijiyay in meydka ganacsadaha iyo dhaawaca wiilkiisaba la soo gaarsiiyay Isbitaalka.
Dilka ganacsadaha, ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa, xilli Talaadadii uu Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, uu bulshada kaga digay dilal qorsheysan oo laga gaysto Xarunta Gobolka Hiiraan.
Ugaas Xasan, ayaa bulshada reer Hiiraan kula dardaarmay in ay iska kaashadan xaqiijinta nabadgelyada, haddii ay ku hawlan yihiin Maamul Goboleed gaar ihi, oo ay u samaynayan Gobolka Hiiraan.
Sheekh Shariif oo saaka ku soo wajahan magaalada Muqdisho
NUSOJ oo ka hortimid go’aanka Saxaafadda looga mamnuucay Garoonka Aadan Cadde